किचन स्ल्याबमा बसाएर दिदीको टाङ् फट्याईदिएँँ - Nepali Sex Tube
किचन स्ल्याबमा बसाएर दिदीको टाङ् फट्याईदिएँँ
हामी चितवनको भरतपुरमा बसिरहेका छौं । दिदी चितवन मेडिकल कलेजमा काम गर्नुहुन्छ । मेडिकल कलेजकै नजिकमा हाम्रो फ्ल्याट छ । दुई कोठा सहितको फ्ल्याटमा किचन छुट्टै छ र दिदी सुत्ने कोठामा एटेच बाथरुम छ भने मेरो लागि किचनको छेउमा अर्को बाथरुम छ । जसलाई हामीकहाँ आउने पाहुनाले पनि प्रयोग गर्छन् । किचनको ठिक अगाडी सानो खुला बरण्डा छ, जसमा हामी फुर्सदको समयमा चिया खाँदै पारिवारिक गफगाफ गर्छौं साथमा टाइमपास पनि । म अक्सफोर्ड कलेजमा बिसिए अन्तिम सेमेष्टरमा पढ्दैछु ।
मेरो कोठामा डेस्कटप कम्प्युटर छ भने दिदीसँग १४” को ल्यापटप र २२” को टि.भी. । एडिएसलको सस्तो ईन्टरनेट कनेक्सनमा म आफ्नो पढाईसँग सम्बन्धित काम गर्छु भने दिदी प्राय ड्युटी सकेर आएपछी खाली समयमा फेसबुकमा रमाउनुहुन्छ । घरमा दिदीको कुरा चलेपनि दिदीले नर्सिङ्गमा मास्टर्स गरपछी मात्रै बिहे गर्ने भनेर रोकिरहनुभएको थियो । मलाई थाहा भएअनुसार दिदीको एउटा ब्वाईफ्रेण्ड थियो । सोहि मेडिकल कलेजको डाक्टर तर मैले त्यो डाक्टरलाई भेटेको र देखेको थिईन । दिदीले घरमा बस्दा कहिलेपनि मोबाईल प्रयोग गरेको मलाई थाहा छैन । हाम्रो फ्ल्याटमा छिर्नको लागि भर्र्याङ सँगै च्यानल गेट थियो र चाबी हामी छुट्टाछुट्टै लिएका हुन्थ्यौं । दिदीको हप्तामा दुईदिन नाइट ड्युटी पर्दथ्यो भने दुई दिन मर्निङ ड्युटी र दुई दिन डे ड्युटी । दिदीको हप्ताको एक दिन विदा त हुन्थ्यो तर कुन दिन भन्ने ठेगान हुन्थेन । त्यसकारण बेलुका चार दिन दिदी र म अलि बढी सँगै बस्न पाउँथ्यौं । दिदी नाइट ड्युटीमा जाँदा प्राय: बिहानको चार-सवा चारबजे छुट्टी हुन्थ्यो भने म बिहानै सात बजे कलेज जान्थे । दिदी ड्युटीमा जाँदा लोडसेडिङको बेलामा म दिदीको ल्यापटप चलाउने गर्दथें । दिदी र म फेसबुकमा पनि एकापसमा आबद्व थियौं । लाईक गर्ने बाहेक हाम्रो अरु कुनै कुरा फेसबुकमा हुँदैनँँथ्यो । समग्रमा भन्दा हामी दिदी-भाई एकै ठाँउमा बसेपनि त्यति खुलेर बोल्ने वातावरण अथवा समय रहँदैनथ्यो । कोठामा दिदी नहुँदा मैले खाना बनाउँथेँँ भने म नहुँदा दिदीले, तर दिदीको बिहान ड्युटी पर्दा भने हामी दुवैले बाहिर खाना खान्थ्यौं ।
म दिदीको कोठामा प्राय: छिर्दैनथें भने दिदी पनि सफा गर्ने बेलामा बाहेक अरु बेलामा मेरो कोठामा छिर्दैनथी । पछिल्लो समय मैले दिदीको अनुहारमा त्यति चमक देखेको थिईन । अलि बढी गुमसुम भएर बसेको मैले अनुमान लगाएको थिएँँ । सायद दिदीको ब्वाईफ्रेण्डसँग खटपट परेको हुनसक्थ्यो नभए चाही ठूलै समस्या परेको हुनसक्थ्यो । आजसम्म दिदी र मैले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरु एकार्कामा बाँडेका पनि थिएनौँँ जसले गर्दा मैले त्यति धेरै चासो राख्दा पनि दिदीले के सोच्ली जस्तो लाग्थ्यो ।
शुक्रबारको दिन थियो, दिदीको नाइट ड्युटी परेको थियो । त्यसैले खाना खाइवरी दिदी ड्युटीमा जाने तयारी गर्दैथिई । दिदी जानै लाग्दा मैले आठ बजेबाट लोडसेडिङ छ भनेर ल्यापटप मागेँँ । मेरो आसाईनमेन्ट आईतबार बुझाउनुपर्ने पनि थियो । अनि एक्लै टाईमपास पनि हुन्थ्यो । निस्कने बेला भएकोले होला दिदीले “कोठामा छ निकालेर चलाई !” भन्दै बाहिर गई । दिदी बाहिर निस्केपछी, मैले दिदीको आदेश अनुसार दिदीको कोठामा छिरेर ल्यापटप निकालेँँ । दिदीको कोठामा अन्य दिनभन्दा फरक दृष्य मैले पाएँँ । दिदीका कपडाहरु यत्रतत्र छरिएका थिए, किताबहरु पनि जहाँतहीँँ नमिलाईकन राखिएको थियो । मलाई थाहा भएसम्म दिदी अति नै सफा र कोठा मिलाएर राख्ने थिई । यसपटक दिदीलाई साह्रै नै बिरक्त हुनेगरि घटना घटेको छ भन्ने मैले फिल गरे । त्यो भन्दा बाहेक मैले के नै गर्न सक्थें र ? दिदीको कोठाबाट ल्यापटप निकालेर म आफ्नो कोठामा आएँँ ।
आइतबार बुझाउने असाइनमेन्ट मैले सोचेको भन्दा भिन्न तरिकाले समाधान भएपछाडी म ईन्टरनेट चलाउने उद्देश्यले ब्राउजर खोलेँँ । संयोगले फेसबुक अकाउण्ट लग-आउट गरिएको रैनछ । मैले दिदीको अकाउण्ट साईन आउट गर्ने हेतु मेनुमा क्लिक गर्नै लाग्दा अकाउण्ट होल्डरको नाम अनौठो लाग्यो । मैले सोचें शायद: दिदीले नाम परिवर्तन गरेकी हो की ? तर साधारणतया दिदीले फेसबुक नेम परिवर्तन गरेको भए त मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो त्यसैले दिदीको साथीको अकाउण्ट हो कि भनेर मैले प्रोफाईल ब्राउज गर्न थालें । तर त्यो अकाउण्टमा परिचय खुल्ने केही भेटीनँँ । त्यहाँ जम्मा आठ जना फ्रेण्ड मात्र देखिन्थ्यो भने त्यसमध्य दुई जना मात्र लेडिज जस्तो लाग्थ्यो बाँकी केटाको नामको फ्रेण्ड जस्तो देखिन्थ्यो । के भयो के मैले प्रोफाइल सुक्ष्म तरिकाले केलाउने बिचार गरें र पहिला अकाउण्ट वालाकै वालमा हेरें, त्यतिधेरै स्ट्याटस पनि थिएन । अलि अलि भएको पनि “होम अलोन…” “फिलिङ् बोर…” “नथिङ स्पेशल…” जस्ता मात्र थिए, मैले त्यस अकाउण्टको फ्रेण्डलिस्टमा भएका सबैको एकएक गरि वाल चाहारें तर केही भेटिएन । एकजनाको “कालीको ब्वाइफ्रेण्ड” भन्ने अकाउण्टले मलाई निकै भुलायो । वालमा निकै दुईअर्थी कुराहरु लेखेको थियो र जसको लग-इनमा मैले हेरिरहेको थिएँँ । “काली केटी म” ले कमेण्ट गरेको भेटिन्थ्यो “तेरो काम छैन…” “दिमागमा त्यति बाहेक केही छैन है…” “गोबर भरिएको दिमाग…” जस्ता कमेण्ट बढी भेटिन्थ्यो । एउटा पोष्टमा चाँही “कालीलाई काखमा राखेर स्पेशल किस गर्न मन लागेको अवस्था” भनेर पोष्ट गरेको रहेछ त्यसमा । “गर न त मैले नाई भनेको छु र ?” भनेर कमेन्ट थियो, अनि कमेन्टको रिप्लाईमा “आउ न त खोलेर मेरो काखमा…” लेखेको थियो । फेरी “खोलेर किस गर्न त धेरै कुर्नुपर्छ” भन्ने थियो अनि लगत्तै “त्यसोभए एकछीन मेसेञ्जरमा अनलाईन आउ न त ?” लेखेको थियो अनि फेरी “म अनलाइननै छु… आउ” भनेर लेखेको देखेपछी । म फेसबुकको मेसेञ्जरमा प्रवेश गरें । समस्या के भनें त्यो अकाउण्ट अनलाईन देखियो भने ? मैले यसो साईडमा हेरें अनि त्यो अकाउण्टलाई अफलाईन मोडमा राखेर मेसेञ्जरको च्याट म्यासेज पढ्न सुरु गरें । त्यो च्याटमा त पुरै एउटा र केटीबिच हुने सेक्सका कुराहरु मात्रै थिए । मैले त्यो मेसेञ्जर च्याटबाट सम्भव भएसम्मको मेसेजहरु कपि गरेर आफ्नो पेनड्राइवमा सेभ गरें, अनि अरु च्याट लिष्ट ओपन गरें ।
केटीजस्ता लाग्ने अकाउण्टमा पनि तेरो ब्वाईफ्रेण्डको लाँडो कत्रो छ, हप्तामा कतिपटक चिकाउँछेस्, तेरो ब्वाईफ्रेण्डले कति मिनेटसम्म फक गर्छ, सेकेण्ड टाईम गर्छ कि गर्दैन, फुसी कति झार्छ, तेरो पुती सक गर्छ कि गर्दैन, तैले लाँडो चुस्छेस् कि चुस्दिनस्, मेरो ब्वाईफ्रेण्डले चाकमा पनि चिक्छु भनेर हैरान पारेको छ के गर्ने होला, ब्वाईफ्रेण्ड नभाको बेलामा पुती चिलायो भने के गर्छेस्, तेरो ब्वाईफ्रेण्डले तलाईं घरमा चिक्छ कि होटलमा लैजान्छ कि आफ्नै रुममा बोलाउँछेस आदि इत्यादि ।
एउटी “पोक्ची केटी म” भन्नेको च्याटमा त अति नै कुरा गरेको रहेछ । तैलें तेरो घरमा कसैलाई चिकाएकी छेस्, तेरो भाईको लाँडो कत्रो छ, लाँडो कालो छ कि कस्तो, कति मोटो छ, तेरो भाईको लाँडो चुसेकी छेस्, तेरो भाईले तलाई घुर्छ कि घुर्दैन, तेरो बाउको लाँडो कस्तो छ नि ? तेरो घरमा आउने पाहुनालाई सन्काउछेस् कि सन्काउन्नस् आदि ईत्यादी । केटीहरु त्यो हदसम्म गफ गर्छन् भन्ने मैले सोचेको पनि थिईन । लगभग सबैको मैले च्याट मेसेज कपि गरें अनि सबैको फेसबुक कन्ट्याक्ट पनि कपि गरेर पेन ड्राइवमा राखें । निकैबेर सोचेपछी मैले मोबाइलबाट सबै फेसबुक कन्ट्याक्टलाई आफ्नो फेक प्रोफाइल बनाएर फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाएँँ । “काली केटी म” भन्ने ल्यापटपमै रिक्वेष्ट आयो । मैले बिचार गरें, “यदी यो दिदीकै प्रोफाइल हो भने मलाई एसेप्ट गर्ली कि नगर्ली अथवा त्यो दिदीको अकाउण्ट नहुन पनि त सक्थ्यो ? तर जसको भएपनि एसेप्ट होला कि नहोला ? तर अचम्मै भयो, “काली केटी म” ले तुरुन्तै मेरो फ्रेण्ड रिक्वेष्ट एसेप्ट गरि ।
घडीमा साढे एघार बजिसकेको थियो त्यसैले मैले दिदी आउनुभन्दा अगावै दिदीको पुरै ल्यापटप सर्च गर्ने निर्णय लिएँँ र सर्चमा गएर *.* थिचें । थुप्रै फाईलहरु सर्चलिष्टमा देखिएका थिए । मैले फाईल टाइप अनुसार रिजल्टलाई सर्ट गरें अनि हेर्न थालें । एउटा फोल्डर भेटियो “डण्ट ओपन दिस” मलाई त्यही खोल्न मन लाग्यो र खोलें । ए मेरि आम्मा ! त्यहाँ त निकै धेरै पोर्न भिडियो रहेछ । मैले एक एक गर्दै सबै भिडियोहरुलाई आफ्नो एक्स्टर्नल हार्डडिस्कमा कपि गरें र फेरी सर्च रिजल्ट हेर्न थालें । एउटा अर्को फोल्डर प्राईबेट भन्ने फेला पर्यो र मैले खोलेर हेरे । त्यहाँ त दिदीको सेल्फी फोटोहरु थिए । दिदीले बाथरुममा र बेडरुममा अर्धनग्न भएर खिचेको फोटोहरु थियो । मैले तिनलाई पनि कपि गरेँँ र अझै हेर्न थालें । प्राइबेट भित्रको हिडन फोल्डरमा त दिदीको नाङ्गो फोटोहरु पनि थिए । मेरो लाँडो ठन्किसकेको थियो । जिवनकै पहिलोपटक मैले आफ्नै दिदीको नाङ्गो फोटो हेरेर छोलें अनि दिदीको नाममा लाँडोबाट एकमुठी नौनी निकाले ।
म बाथरुममा गएर मुठ्ठिको नौनी पखाल्ने सोचमा अगाडी बढें तर बेसिनमा पुगेपछी सम्झिएँँ “ब्लु-फिल्ममा तरुनीले यो फुसी निलेको देखाउँछ भने मैले नै चाख्दा के फरक पर्छ र ?” अनि फुसी सरासर मुखमा हालेँँ । सुरुमा त नुनिलो कस्तो कस्तो तमतम्याइलो त्यो झोल निल्न मन लागेन तर जे त पर्ला भनेर मैले सबै निलेँँ अनि कोठामा फर्किएँँ । एकाध घण्टासम्म मलाई फुसीको स्वादले कस्तो कस्तो बनायो । त्यसपछी ल्यापटप बन्द गरेर म सुतेँँ । बिहानपख दिदी ड्युटीबाट फर्केर घरमा छिरेको निँदमा हो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो । सवा छ बजेको अलार्मले म बिउँझिए, “आहा ! राती कस्तो मिठो निद्रा लागेको ।” मैले आफूलाई यसो हेरें, बेलुकी छोल्ने बेलामा कपडा खोलेकोले म अझै नाङ्गै रहेछु । हात अनायासै लाँडोमाथी पुग्यो र सुमसुम्याउन थाल्यो । मैले फेरी हिजो बेलुकिको दिदीको फोटो सम्झिए अनि एकतमासले छोल्न थालें । केहि क्षणमै मेरो हातमा फुसी भरियो । मैले बेलुकिको घटना सम्झिएँँ र फेरि फुसी चाटें । यसपटक मलाई फुसीको स्वादले मन्त्रमुग्ध बनायो र मैले हत्केलालाई ओल्टाईपोल्टाई पुरै फुसी चाटेर सकें । मलाई खुुब मजा आयो ।
त्यसो पनि शनिवार म आठबजेसम्म सुत्ने गर्थें, तर आज दिदीको नाममा दुई-दुई पटक छोलेर सुतेकोले होला साढे आठ बज्दा पनि नउठेपछी दिदीले मेरो ढोकामा जोडले ठोक्दै मलाई बोलाई । झसँग भएर हजुर भन्दासम्म दिदी मेरो कोठामा छिरिसकेकी थिई । राती छोल्दाखेर म पुरै नाङ्गै भएर सुतेको थिएँँ । गर्मीको समय भएकोले सिरक अथवा ओड्ने केही पनि बिस्तरामा नभएकोले मेरो ठन्केको लाँडो दिदीले देखिहाली र दिदीको मुखबाट निस्क्यो “आम्मै कति ठूलो !” अनि दिदी मुख छोपेर बाहिर निस्किई । मैले साधारण मानिसको लाँडोको साईज कत्रो हुन्छ भनेर थाहा पाएको थिईन न देखेको नै थिए । त्यही भएर मेरो लाँडोको साईज नर्मल नै छ भन्ने सोच्ने गर्थें तर ब्लु-फिल्मका पात्रहरुको लाँडोभन्दा मेरो सानो छ भन्दै आफ्नो लाँडो कसरी ठूलो बनाउने भन्ने मेरो दिमागमा घुमिरहन्थ्यो ।
एक त नर्स दिदीलाई लाँडोको साईज थाहा हुन्थ्यो, अर्को ब्वाईफ्रेण्डको पनि लाँडो चाखेकी हुँदी हो भन्ने हिसाबले दिदीले मेरो लाँडो ठूलो भनेदेखि मलाई एक किसिमको सन्तुष्टी भने भईरहेको थियो । कम्तीमा पनि मेरो लाँडो सानो चाँही छैन भन्ने विश्वास भएपनि दिदीको अगाडी के भनेर मुख देखाउनु भन्ने असमञ्जस भईरहेको बेलामा दिदीले चिया लिएर मेरो कोठामा प्रवेश गरि । अघि दिदीले देखेदेखि मैले सोचैसोचमा कपडा नै लगाउन बिर्सेको रहेछु । दिदीले सहजै भनी “छि कस्तो नकचरो तँ त ! कपडा लगा छिटो कस्तो लाज पनि नभाको ।” भनेपछी मैले हत्तपत्त छेउको टावल कमरमा बेरें । मैले टावल बेर्दासम्म दिदीले मेरो हातमा चिया थमाईसकेकी थिई । त्यसपछी दिदी त्यहाँबाट निस्केर किचनमा पुग्दा मेरो कोठाको ढोकाबाट फर्केर जिब्रोले ओंठलाई चाट्दै मुस्कान सहित गएकोले म भने रोमाञ्चित भएको थिएँँ । मलाई यस्तो लाग्यो जस्तो सुकै भएपनि आफ्नै दिदीले ठूलो भनेको मेरो लाँडो लोभ लाग्दै हो । दिदीले त थुक निलेर गई भने अरुले त के के गर्लान् के के ? अब भने मलाई चिक्ने ईच्छा निकै नै जागृत भएर आएको थियो । तर त्यसको व्यवस्था अथवा चाँजोपाँजो कसरी मिल्छ भन्ने मेरो लागि नौलो बिषय थियो र विवाह नै मानिसको चिक्ने ईच्छाको परिपुर्ती गर्ने माध्यम हो भन्ने निस्कर्षमा म पुगेको थिएँँ ।
आज पनि दिदीको नाइट ड्युटीनै थियो । त्यही भएर “काली केटी म” सँग फुर्सदमा बेलुकी लाईन नभएपनि च्याट गर्न पाउने आशामा म थिएँँ । साँझको खाना खाईबरी दिदी गएपछी म दिदीको कोठामा ल्यापटप निकाल्ने उद्देश्यले छिरें । ल्यापटप हातमा लिएपछाडी मलाई किन किन दिदीको दराज चहार्ने मन भएर आयो । आजसम्म मैले दिदीको कोठामा छिरेर १-२ मिनेट भन्दा बढी बिताउने दुस्साहस गरेको थिईन तर आज म दिदीको दराजनै छापा मार्दै थिए । दराजमा एकपछी अर्को गर्दै च्याम्बरमा हेर्दै जाँदा दिदीको कपडाहरु बाहेक खासै भेटिएन बरु दिदीका अन्त:वस्त्रहरु भने अनेकथरीका भेटिए । कतिपय दिदीका अन्त:वस्त्रहरु मैले ब्लु-फिल्ममा महिला पात्रले लगाउने जस्तो मात्र देखें भने कतिपय अन्त:वस्त्रहरुले बुब्सलाई सेपमा मात्र राख्ने तर बुब्स नछोप्ने अनि पुतीको मुख्य भाग बाहेक अरु भाग मात्र छोप्ने खालका थिए भने धेरैजसो वस्त्रहरु राती सुत्दा लगाउने तर एकदमै पातला र छोटा देखिन्थे तर पनि दिनमा बाहिर निस्कँदा लगाउने वस्त्रहरु भने निकै भलादमी पाराका पनि देखिन्थे । त्यसपछी मैले दिदीको दराजमा भएको ड्रअर खोलें, वाउ ड्रअरमा त हजारहजारको दुईवटा वण्डल नोट र ५०० अनि हजारका छुट्टै नोटहरु छरिएर रहेको देखेँँ । मलाई पैसासँग खासै सरोकार पनि थिएन । ड्रअरको कुनापट्टी भने लेटेक्स कण्डमको १५-२० वटा प्याकेट मिलाएर राखिएको थियो । अनि त्यसैको सँगै दुईवटा पेन ड्राईव र केही नाम नखुलेका सि.डी.हरु थिए । ती सि.डी. लाई मैले दिदीको ल्यापटपमा हाल्न खोज्दा ल्यापटपमा पहिल्यै एउटा सि.डी.भित्रै थियो, त्यो सि.डी.को माथिल्लो भागमा “माई डर्टी फेमिली” भन्ने नाम रातो मार्करले लेखेको थियो । मैले त्यही सि.डी. फेरी भित्रै छिराएँँ र प्ले गरें । पारिवारिक नाता-सम्बन्धका बिचमा भएको ब्लु-फिल्म रहेछ त्यो । दिदी-भाई, आमा-छोरा, बाबु-छोरीका बिचमा हुने भनिएको त्यसको कथा मलाई राम्रो लाग्यो । म आफ्नो कोठामा पुगेर एक्स्टर्नल हार्ड-डिस्क निकालेर ल्याएँँ अनि मेरो हार्ड-डिस्कमा कपि गर्न थालेँँ । दिदीको दराजमा भएका अरु सि.डी.पनि ब्लु-फिल्मकै रहेछन् । मैले सबै कपि गरेँँ र दिदीको दराजलाई जस्ताको तस्तै छोडेर आफ्नो कोठामा आएं, दिदीको ल्यापटपमा ब्लु-फिल्म हेर्दै म मोबाईलमा च्याट गर्न थालें ।
बि. – हाई ! के म तिमीलाई चिन्छु ?
म – किन चिन्न पर्यो ? गफ गर्दा भैहाल्छ नि ? चिनेर पो के गर्छ्यौ र ?
बि. – ओके जे परोस्, तिम्रो नाम के हो नि ?
म – (अब उदय भन्यो भने त चिन्ला कि भन्ने डर, फेरी दिदी नै पो हो कि ?) हरि ! अनि तिम्रो ?
बि. – म बिनीता हो ! (लौ जा यो त साँच्चिकै दिदी नै पो रहिछे) हाउ ओल्ड आर यु ?
म – (मैले ढाँटे) 26 एण्ड यु ?
बि. – मि 25 (कन्फर्म नै भएं म बिनीता दिदी नै हो भनेर, म दोधारमा परें च्याट गर्ने कि नगर्ने भनेर, फेरी दिदीलाई सम्झेर छोल्न चाँही हुने च्याट गर्दा के हुन्छ र ? फेरी दिदीले मलाई चिन्ने भए पो भन्दै नचिके भई त हाल्यो भन्दै च्याटमा अगाडी बढें ।)
म – ह्वाट आर यु डोइङ्ग ?
बि. – आई एम अन ड्युटी एट हस्पिटल ? एण्ड यु ?
म – मि जस्ट अ स्टुडेण्ट, सर्चिङ्ग फर अ जब ? (मैले ट्राई हाने के भन्छे भनेर) या, बिनीता हाउ ब्ल्याक आर यु ?
बि. – (म झण्डै बेहोस् नै भएँँ) म कि मेरो पुती ? (मैले बिनीताले यस्तो रिप्लाई गर्छे भनेर विश्वास नै गरेको थिईन, एकछिन सम्म भाउन्न भएपछाडी मैले मनमनै भनें आखिर दिदीको नाङ्गो फोटो पनि हेरेकै हो क्यार ! के नै फरक पर्छ र दिदी भन्ने बिर्सेर अरुनै तरुनीसँग च्याट गर्दैछु भन्ने हिसाबले म रेडी भएँँ)
म – दुबै !
बि. – पहिला तिम्रो लाँडोको लेन्थ कति छ भन अनि ?
म – मेरो लाँडोको लेन्थ त मैले नापेकै छैन ?
बि. – छ्या २६ बर्षको घोर्ले अनलाईनमा सेक्सी च्याट गर्न आको रे आफ्नो लम्बाई पनि थाहा छैन ?
म – नापेको भए त थाहा हुन्छ नि ?
बि. – त्यसो भए एउटा काम गर ?
म – के ?
बि. – तिम्रो लाँडोले चाकको प्वाल टच गर्छ कि गर्दैन ?
म – एकछिन है म ट्राई गरेर भन्छु ! (मैले आफ्नो लाँडोलाई ट्राई गरेर हेरें, मेरो लाँडोले चाकको प्वाल छुँदो रहेछ, अझै अलिकति कोशिस गर्यो भने त सुपारी जस्तो टुप्पो चाकभित्रै छिर्ने रहेछ, मैले भनें) त्यसो गरेर हेर्दा त लाँडोको टुप्पो प्वालभित्रै छिराउन पनि सकिन्छ ।
बि. – त्यसो भए चाकको प्वालमा चाँही नछिराउ फेरी मकहाँ उपचार गर्न आउनुपर्ला, तिम्रो लाँडोको लेन्थ झण्डै साढे आठ देखि नौ ईन्च छ नपत्याए स्केलले नापेर हेर ।
म – एकछिन है त म नापेर हेर्छु ! (मैले साँच्चिकै स्केल लगाएर नापेर हेरें नौ ईञ्च रहेछ । मैले आफ्नो लाँडोको गोलाई पनि नापेर हेरें) नौ ईञ्च रहेछ, लौ भन त त्यसोभए मोटाई कति होला ?
बि. – मोटाई त त्यसरी थाहा हुन्न तर नौ ईञ्चको लाँडोको स्ट्याण्डर्ड मोटाई भनेको तिन ईञ्च हुनुपर्छ ?
म – तिमी त ज्योतिष नै रैछौ नि !
बि. – एउटी नर्स जो हरेक बिरामीको सम्पूर्ण कपडा खोलेर हेर्नुपर्नेसम्म हुन्छ । उसलाई यस्तो सामान्य कुरा थाहा भईहाल्छ नि ।
म – अनि अर्को कुरा सोधुँँ ?
बि. – भन न के कुरा हो ?
म – त्यसो भए केटीको पुती कति लामो र गहिरो छ भनेर कसरी थाहा पाउने ?
बि. – पुतीको चिरिएको भाग चाँही सामान्यतया ओंठको लम्बाई बराबर हुन्छ अब गहिराई त लाँडो पुतीमा छिराएपछी थाहा भईहाल्छ नि ?
म – अँ अब केटीलाई तिम्रो पुतीको गहिराई नाप्छु भन्दा पुती थापेर ल नाप् भन्छन् नि ?
बि. – म त दिन्छु क्यार !
म – गफै त हो सोल्टिनी !
बि. – तिम्रो घरमा को को छ नि ?
म – म र मेरो दिदी छुु, अनि तिम्रो ?
बि. – ए ! मिलेछ नि त ? मेरो पनि एउटा भाई छ ! आमा गाउँमा हुनुहुन्छ ? तिम्रो दिदी म्यारिड हो कि होइन ?
म – नाई सि ईज अनम्यारिड ?
बि. – तिमी २६ भयौ भनेपछी तिम्रो दिदी पक्कै पनि तिमीभन्दा एक वर्ष जेठीनै होली ? तिम्रो दिदीको ब्वाईफ्रेण्ड हुनुपर्छ पक्का ?
म – तिमी कसरी ठोकुवा लगाएर भन्न सक्छ्यौ ।
बि. – त्यत्रो उमेर पुगेकी केटीको पुती त पक्का चिलाउँछ क्यार अनि ब्वाईफ्रेण्डको लाँडोले चिकाउँछे होली ?
म – मलाई आईडिया भएन ब्वाईफ्रेण्ड भए त बिहे गर्ने कुरो पनि त हुन्थ्यो होला नि ?
बि. – बिहे नगरि चिकाउन पाएपछी केटीलाई बिहेको त्यति हतारो हुन्न क्या ? म पनि त ब्वाईफ्रेण्डलाई चिकाउँथे मुर्दारले मलाई छोडेर अर्कै लिएर हिँड्यो र पो !
म – अब ब्वाईफ्रेण्ड भागेपछी कोसँग चिकाउँछ्यौ त ?
बि. – दुई दिन त जाँठाको लाँडो सम्झेर निकै रोएँँ, त्यसपछी आज बिहान भाईको लाँडो देखेपछी त मलाई भाईकै लाँडो हुँदाहुँदै जाबोको लाँडो सम्झेर के रुनु भन्ने भयो ? अब भाईको लाँडो मेरो पुतीमा कसरी छिराउनु भन्ने टेन्सन चाँही भईरा’छ… भाई मोरो अलि लाटो छ के नत्र त चार बर्ष भयो, मैले त्यसको लाँडोनै देख्न पाएको थिईन । पहिल्यै देख्या भए त जाँठा ब्वाईफ्रेण्डलाई म आफै छोडिदिन्थें ।
म – (दिदी मेरो लाँडोले चिकाउन आतुर छे भन्ने सुनेर रोमाञ्चित हुँदै) अनि दिदी भाईको त्यस्तो सम्बन्ध पनि कहिं हुन्छ त ? कसैले थाहा पायो भने ?
बि. – मैले मलाई ब्वाईफ्रेण्डले चिक्यो भन्दै हिँडेको छैन क्यारे ? भाईले पनि नभन्ला नि त ?
म – त्यो त हो ? तर मलाई त पत्यार लागेन ?
बि. – तिमीले दिदीलाई आफ्नो लाँडो देखाएको छ्यौ ?
म – खै मैले देखाउँछु भनेर देखाको त छैन, सँगै बस्छौं क्यार देखेको हुन पनि सक्छ नदेखेको हुन पनि सक्छ ?
बि. – अनि दिदीको बुब्स देखेको छौ ? अथवा नाङ्गै हेर्न मन लागेर चियोचर्चो गरेको छौ ?
म – खै त्यस्तो ख्याल आको छैन, मलाई ईन्ट्रेस्ट पनि छैन ?
बि. – तिमीले आजसम्म तरुनी चिकेको छ कि छैन ?
म – छैन, फुर्सद भए पो ?
बि. – साथीहरुसँग रण्डी चिक्न पनि जान्नौं ?
म – नाई !
बि. – तिम्रो साथीहरु खत्तम रैछन् । ब्लु-फिल्म हेरेको छौ ?
म – ब्लु-फिल्म त धेरै हेरेको छु !
बि. – अनि तिमीलाई चिक्न मन लाग्दैन त ?
म – मन लागेर मात्र हुन्छ ? बिहे गर्नु परेन ?
बि. – छ्या ! तिमी त लाछी रैछौ, घरमा दिदी हुँदाहुँदै पनि हेर्न मन नलाग्ने, रण्डीकोमा पनि नजाने… एक चोटी दिदीलाई लाँडो देखाउने ट्राई गर त ? तिम्री दिदीले आफै तिम्लाई सबै थोक देखाईदिन्छे । खाली याद के गर भने दिदीले मलाई चिक भनेर पुती थाप्दै चाँही आँउदिन, त्यो कामको सुरुवात तिमी आफैंले गर्नुपर्छ ।
म – दिदीलाई त्यो नजरले हेर्नु त पाप हो नि ? (बिनीता साँच्चिकै चिकाउन आतुर छे र मैले चाहेको खण्डमा सजिलै मेरो मुनि सुत्न आँउछे भन्ने त स्पष्ट नै थियो ।)
बि. – सहमतिमा हो भने चिक्नु पाप हुँदैन । आखिरमा शारिरीक जरुरत पनि त हो नि ?
म – ठिकै छ म एकपटक ट्राई गर्छु । अनि बरु तिमी भन त दिदीलाई मेरो बिस्तरामा ल्याउन सुरुवात कहाँबाट गरुँ ?
बि. – याद राख नि फेरी ! दिदीले मानी भनेमात्र चिक्नु नि जबरजस्ती नगर्नु । पहिला आफ्नो लाँडो दिदीलाई देखाउ अनि दिदीको बानी ब्यहोरा बिचार गर तिम्रो लाँडो देखेर दिदी तिमीसँग नजिकिन थाली वा कोशिस गरि भने बुझ्नु कि उसलाई तिम्रो लाँडो चाहिएको छ ।
म – अनि तिमीले देखायौ त भाईलाई ?
बि. – छैन, अब आज भोलीमै म देखाउने कोशिस गर्छु । लुज कपडा लगाएर बुब्स देखिने गरि पहिलो प्रयास: गर्छु, हेरौं मोरोले के गर्छ !
म – ल त्यसो भए तिमी ट्राई गर म त सुतें, के हुन्छ भोली कुरा गरौंला !
बि. – ओके । अब आज त हातैले शान्त भएर सुत्ने होला ! एनिवे ह्याव अ स्वीट ड्रिम ।
म – सेम टु यु !
त्यसपछी म ल्यापटपमा ब्लु-फिल्म हेर्दै छोल्न थालेँँ । स्वाभाविक भन्दा छिटो दिदीको नाममा मैले तेस्रो पटक माल झारेँँ अनि हातमा दलिएको सबै फुसी चाटेर निलें । तेस्रो पटकमा त मलाई फुसीको स्वाद एकदमै प्यारो लाग्न थाल्यो । घडी हेरेको झण्डै एक बज्न थालेको रैछ । छोलेपछाडी म कतिखेर निदाए भन्ने पत्तो नै पाईन । बिहान एकैपटक दिदीले बोलाएपछाडी मात्र म ब्युँझिए । दिदीको हातमा चिया थियो, मैले आँखा खोल्दा दिदी भित्र छिरिसकेकी थिई, “छ्या ! यो त सधैं नाङ्गै पो सुत्दो रहेछ, नाङ्गै सुत्ने भएपछी त ढोकामा चुकुल लगाउनु नि !” सँगसँगै दिदीले मेरो लाँडो हेरेर थुक पनि निली । मैले याद गरेको थिईन दिदीले त पातलो तर लामो फ्यालफ्याले टि-शर्ट लगाएकी थिई, टि-शर्टले उसको कमरभन्दा मुनि आधा तिघ्रा सम्म छोप्न सकेको थियो । त्यो टि-शर्टबाट दिदीको बुब्सका निपल बाहिर निस्कन खोजेझैं देखिन्थे भने दिदीले पेन्टी लगाएकि छ कि छैन भन् मैले पत्तो पाउन सकिन । मैले टावलले कमर बेरिसकेको थिंए दिदीले मुस्काउँदै सोधी “आज कलेज जानु पर्दैन !” मलाई मेसो आएन र तुरुन्तै भनिदिएँँ “आज एक पिरियड मात्र हुन्छ भनेर नगा’को !” दिदी बाहिर निस्कन खोज्दै भनि “ल चिया खाएर आईज म नास्ता तयार गर्दै गर्छु ।“ दिदीको पछाडीको भाग नियाल्दा दिदीले पेन्टी लगाएकी रैनछ भन्ने मैले अनुमान लगाएँ । चिया पिईसकेर म कपडा लिएर नुहाउनको लागि बाथरुम छिरें ।
जब नास्ताको लागि म बरण्डामा पुगें, दिदीले टोस्ट-अम्लेट तयार गरेकी थिई । मैले हाफ पेन्ट लगाएको थिए। गएर दिदीको सामुन्ने बसें अनि चिया र टोस्ट-अम्लेट खान थालें । दिदीले पढाई सम्बन्धि केही प्रश्नहरु गरि, मैले पनि उत्तर दिदैं आफ्नो छिट्टै नै जागिर पक्का हुने खबर दिदीलाई दिएँँ । बेतको कुर्सीमा बसेकी दिदीले अचानक खुट्टा माथी सारेर एउटा खुट्टालाई कुर्सीमा अर्को खुट्टाको तिघ्रामुनि पर्ने गरि च्यापेर राखी । म दिदीतिरै फर्केर बसेको हुनाले मेरो आँखा दिदीको खुट्टा खप्ट्याईमा केन्द्रित थियो । दिदीको त्यो हर्कतले मेरो आँखामा टि-शर्टको भित्रपट्टी सबै चिज नजर आईरहेको थियो । दिदीको पुती चिल्लो देखिन्थ्यो, सेभिङ् गरेको । बसाईको कारणले दिदीको पुती हल्का फट्टिएर टि.सी.ले चुमुक चुमुक गर्दै मलाई जिस्काइरहेको थियो । छिनमै मेरो लाँडो ठन्किएर दिदीलाई सलामी ठोक्यो । यतिखेर दिदीको आँखा मेरो कट्टुमाथी र मेरो आँखा दिदीको पुतीमा केन्द्रित थियो, उता दिदीको पुतीले मलाई गिज्याउँथ्यो अनि यता मेरो लाँडोले ठनक्क गर्दै दिदीलाई सलामी अर्पण गर्थ्यो । सम्झिदा निकै रमाईलो क्षण थियो त्यो, हामी दुवै मौन भएर एकार्काको कमरमुनिको अंगलाई हेरिरहेका थियौं । दिदीको पुती देख्दा मलाई त्यही समाएर चाटिदिँउ जस्तो भईरहेको थियो । मैले कट्टुभित्र हात छिराएर लाँडोलाई दिदीले राम्रैसँग देख्ने गरि मिलाएँँ । लाँडो लामो भएकोले कट्टुको ईलास्टिक भन्दा बाहिर लाँडोको सुपारी निस्क्यो अनि लाँडोको टुप्पोमा हल्का पानी जस्तो चिल्लो पदार्थ पनि । मलाई के भनुँ के नभनु भईरहेको थियो ।
हिजो रातीको च्याटले मलाई बढी निडर पनि बनाएको थियो, मैले हल्का मधुरो आवाजमा लाँडोलाई सुमसुम्याउँदै दिदीले सुन्ने गरि भनें – “कति ठन्किन्छ यो पनि !” दिदीले पनि सानो स्वरमा थाहा नपाएझैं गरि “चाहियो होला नि त !” भनेर जवाफ फर्काई अनि हत्केलाले पोकामाथी छोएर तल सार्दै अन्तमा टि-शर्टको तल्लो भागलाई अझै माथी सारिदिई । अनि चारैतिर हेरी । सायद वरपरका घरतिरबाट कसैले हेरिरहेको छ कि भनेर होला । मेरो आँखाले पनि ती कुराको मध्यनजर गरेर आश्वस्त भईसकेको थियो र नजरको अगाडी दिदीको पुती झनै प्रष्ट रुपमा देखिएको थियो । दिदीले मेरो आँखामा आँखा जुधाएर सोधी “ओई ! के हेरेको ! लाज लाग्दैन आफ्नै दिदीलाई कुदृष्टीले हेर्छस् ?” “आऽऽऽ दिदी तलबाट सबै देखिएपछी मैले के गरुँ त नि ?” दिदीले आफ्नै पुतीतिर हेर्दै भनि “कैले देख्याछैनस् !” “फोटो भिडियोमा त देखेको हो दिदी, रियलमा हेर्न पाएको थिईन ।“ मैले त्यति मात्रै के भनेको थिएँँ, दिदीले टि-शर्ट अझै माथी सारेर पुती फट्याएर देखाउँदै भनि “लौ हेर धित मर्नेगरि ! तर कुदृष्टी लाउन पाउँदैनस् नि ?” “यसरी हेरेर त के गर्नु ? डिटेलमा हेर्न मन लागेको छ नि ?” “यहाँ यस्तो बाहिर कसैले देख्यो भने कस्तो ज पनि नभाको ?” समग्रमा भन्दा आगो दुवैतिर सल्किसकेको थियो । मैले अब दिदीलाई सिधै समाएर भुईमा सुताएर चिक्ने मनशाय बनाइसकेको थिए, त्यसैले सानो स्वरमा भनें “भित्रै गएर हेराउने हो की ?” दिदीले पनि जवाफमा “कसले रोकेको छ र !” भन्दै चाक मचक मचक पार्दै भित्र जानलाई उठी । भित्र छिर्नुभन्दा अगाडी दिदीले भाँडा उठाउने निँहुमा मेरो कमर नजिकैसम्म ज्यान तन्काउँदै मेरो लाँडोमा सासले फुकी र भनि “खाईलाग्दो छ !” त्यही मौकामा म जुरुक्क उठ्दै भनें “जाईलाग्दो पनि छ !” उठ्दा मैले कमरलाई दिदीतिर सार्दै मेरो लाँडोले झण्डै झण्डै दिदीको ओंठ छुनेगरि आफूलाई लच्काए ।
दिदीले त्यही बेलामा जिब्रो बाहिर निकालेर लाँडोको टुप्पोमा स्पर्श गरि । मैले पनि कट्टुको ईलास्टिक हल्का सारिदिए जसले गर्दा लाँडोको टुप्पो दिदीको मुखभित्रै छिर्यो । दिदीले प्रतिकार गरेझैं गरेर मलाई जिस्क्याई “कस्तो लाज नभाको मुखभित्रै पो छिरायो त ?” मैले दिदीको टाउकोलाई हातले अठ्याँएर लाँडोमा अड्काउँदै भनें “भित्र मात्र जाँउ न म यसलाई कता कता छिराउँछु छिराउँछु !” दिदीले मेरो लाँडोलाई मात्र एकपटक पुरै मुखमा लिएर थुकिलो बनाईदिई र मुखबाट लाँडो बाहिर छुटाउँदै भनि “भित्र हिँड न त ! कहाँ कहाँ छिराउँछस् म पनि हेरुँ ?” अनि मेरो लाँडोलाई हातले समाएर डोहोर्याउँदै मलाई पनि भित्र लिएर गई । वास बेसिनमा भाँडाहरु राखेपछी दिदीले मतिर फर्किएर हेरी अनि हत्तपत्त मेरो लाँडोबाट हात छुटाएर टि-शर्टको कमरनेरको भागमा समाएर माथी सार्दै काँधबाट पनि माथी पुर्याएर नाङ्गै हुँदै भनि “लौ छिराई कहाँ कहाँ छिराउँछस् ।” मैले दिदीको पोका हत्केलामा समाउँदै दिदीको ओंठमा आफ्नो ओंठ जोडेर किस लिन थालें । दिदी मेरो लाँडो खेलाउन थाली, डेढ मिनेट जति दिदीको पोका खेलाउँदै ओंठ चुसेर छोडेपछी मैले दिदीलाई भनें “मुखैबाट सुरु गरौं न त !” अनि दिदीको काँधमा हातले समाएर भुईतिर पुस गरें । दिदी पनि सहजै भुईंमा घुँडा टेकेर बसी अनि मेरो लाँडोलाई हातले समाएर ओल्टाई-पोल्टाई निकै बेरसम्म हेरिरही अनि लाँडोको टुप्पोबाट छाला फर्काएर स्वाट्ट मुखमा छिराएर चुस्न थाली । दिदीले मेरो लाँडो चुस्दै गर्दा मैले दिदीको टि-शर्ट काँधबाट बाहिर निकालिदिएँ । यतिखेर दिदी पुरै र म कमरमाथी भेस्टमात्र लगाएको अवस्थामा थिएँँ । निकैबेरसम्म दिदीले मेरो लाँडो चुसिरही, शायदै ब्लु-फिल्ममा मात्र त्यति लामो ब्लोजब सिन हुन्थ्यो । मेरो लाँडो त पुरै दिदीको थुकले भिजेको थियो नै लाँडो चुस्दाचुस्दै दिदीको मुखबाट निस्केको र्यायालको मुखबाट तल झर्दै दिदीको पोकापनि भिजाउन भ्याएको थियो ।
जब दिदीले मेरो लाँडो मुखबाट निकाली, मैले दिदीलाई भुईबाट उठाएर खडा गरें । अब मेरो लाँडो दिदीको पुतीको ठिक अगाडी सोझिएर दाउ हेर्दैथियो, दिदीले अचानकसँग मेरो मुखमा मुख जोडी र मेरो थुकसँग आफ्नो थुकको मिलन गराउन थाली । पुरा एक मिनेटजस्तो तेसो गरेपछी दिदीले मेरो भेष्टपनि खोलिदिई । अब दिदी र म दुवै जन्मवस्त्रमा टाँसिएका थियौं । मैले दिदीको पोका समाएर जब जोडजोडले निचोर्न थालें । दिदीले मलाई रोक्दै भनी “धेरै जोडले नगर सेप बिग्रन्छ..” मलाई पनि झोंक चल्यो र झनै जोडले पोकामा नङ्ग गाडेर निचोर्दै भनें “जाँठी चिक्दा पुतीको सेपचाँही बिग्रन्न र ! नखरा पार्छै….” त्यसपछी दिदीलाई जुरुक्क उचालेर बेसिन छेउको किचन स्ल्याबमा बसाएर दिदीको टाङ् फट्याईदिएँँ । उसको पुती निकै पानी छोडेर रसिलो भएको थियो, मैले आफ्नो दाइने हातको चोर औंला उसको पुतीभित्र छिराएर जोडजोडसँग भित्र बाहिर गराउन थालें । दिदीको मुखबाट यौन आनन्दको सित्कार आउन थाल्यो र दिदीले आँखा बन्द गरेर मेरो टाउकोलाई दुवै हातले समाएर मेरो साथ दिन थाली ।
केहिबेरसम्म दिदीको पुतीमा औंला चलाएर खेलेपछी, मैल दिदीको पुतीमा जिब्रो जोडें र चाट्न थालें, दिदी झनै चरम रुपमा मलाई साथ दिदैं भन्न थाली “आऽऽऽऽऽऽहऽऽऽऽऽ… अझै भित्र…. आऽऽऽऽऽऽहऽऽऽऽऽ… मजा आयो…” मैले दिदीको पुतीबाट निस्केको नुनीलो पानी सबै निलेँँ । दिदीको जिउ अस्वाभाविक रुपमा छटपटिईरहेको थियो । पुती चाट्दै गर्दा मैले फेरी दिदीको पोका खेलाउन थाले, उसका निपलहरु निकै कडा भएर मलाई घोचुँँला झैँँ गर्दैथिए । अचानक दिदीले जिउलाई सिथिल छोडिदिई र दिदीको पुतीबाट भुलुक भुलुक गर्दै पानी बाहिर निस्केर मेरो मुखमा छिर्यो । अनि दिदीले भनि “आऽऽऽहऽऽऽ…. म झरें…” म दिदीलाई लाँडोको प्रयोग नै नगरी झार्न सकेकोमा खुसी थिएँँ । दिदी आँखा बन्द गरेर मलाई आत्मसमर्पण गरिरहेकी थिई । मैले दिदीलाई स्ल्याबबाट उठाएर आफ्नो अंगालोमा उठाए अनि दिदीको बेडरुमतिर छिरें ।
दिदीलाई बेडमा सुताएर म पनि दिदीको समानान्तर भएर बेडमा पल्टिएँँ अनि दिदीको ढाडतिरबाट दिदीको पोका खेलाउन सुरु गरें, विस्तारै उसको पोका खेलाउँदै जाँदा दिदीले पनि फेरी मलाई साथ दिन थाली । दिदीले मेरो लाँडो हातले मुसार्दै खेलाउन थाली । पोका खेलाउँदै गर्दा घरिघरि म दिदीको टाउको आधाजति मतिर फर्काएर किस पनि गर्थें । त्यसो गर्दा झनै मजा आउँथ्यो । पाँच मिनेटजति त्यसरीनै बिताएपछी म उठें र दिदीको मुख नजिकै लाँडो ठड्याएर दिदीको पोकामाथी चाक अड्याएँँ । दिदीले सहजै बुझेर मेरो लाँडो चुस्न सुरु गरि । केहिबेर चुसेपछी मैले दिदीलाई भनें “दिदी ! अब तेरो पुतीमा छिर्न रेडी छ मेरो लाँडो…” दिदीले पनि भनी “छिराएर चिक् न त मलाई ! तँलाई कसले रोकेको छ र ? धेरै भयो मेरो पुतीले लाँडो चाख्न नपाएको… झन् तेरो लाँडो त खाईलाग्दो छ… छिटो छिराई… च्यातिदे मेरो पुती… बनाई तेरो रखैल… चिक् मलाई रण्डी जस्तरी…” मैले जिस्कदैं भनेँँ “लाज लाग्दैन तँलाई आफ्नै भाईसँग चिकाउनलाई…” “जुन भाई घरमा नाङ्गै लाँडो ठन्काएर आफ्नै दिदीलाई देखाउँछ त्यो पनि फुसी कक्रक्क परेर सुकेको लाँडो… अनि मलाई लाज सिकाउँछ… तेरो लाँडो सानो भाको भए त कुन्नी ? देख्दै सबै तरुनी पछी लाग्छन्… अनि पुती चिलाएको तरुनीको अगाडी जोसुकै होस् लाँडो प्यारो हुन्छ… छिटो छिरा न मेरो पुतीमा… तेरो लाँडो छिराउन हतार भइसक्यो मलाई…“ त्यति भन्दै दिदीले पुती फ्याँ पारेर मेरो लाँडोको लागि बाटो बनाइदिई । एकछिनसम्म मैले केही नगरेपछी, दिदीले आफैं मेरो लाँडो स
माती र पुतीको मुखसम्म लगेर जोडिदिई, मैले त्यसपछी लाँडोको टुप्पोलाई दिदीको पुतीको ओंठमा बाहिरपट्टी दल्न थालें । पुतीका ओंठमा त्यसो गर्दा सायद तरुनीहरुलाई झनै उत्तेजना बढ्दो रहेछ क्यार दिदी अति छटपटाउन थाली । र भनी “तँ त कलेज भनेर तरुनी चिक्न जान्छस् कि क्या हो ? कसले सिकायो यस्तो गर्न एक्सपर्टले झैं….” “अनि तलाँई चाही कसले सिकायो नि यस्तो एक्सपर्टले मात्रै गर्छन् भनेर…” “मैले त ब्लु-फिल्म हेरेर जानेको…” “मैले पनि त्यही तेरो ल्यापटपमा भा’को ब्लु-फिल्म हेरेर जानेको नि…?” “हुन्छ कहिँँ नपार मेरो ल्यापटपमा ब्लु-फिल्म… जे पायो त्यही बोल्छस् !” मैले पनि लाँडो स्वाट्टै उसको पुतिमा पुरै छिराउँदै भने “मैले हेर्छ भनेर नै छोडेर गएकी होलिस् नि । अझै माई डर्टी फ्यामिली भन्ने ब्लु-फिल्म थियो । तैले मसँग चिकाउनलाई पुरै प्लान गरेकी होस् जस्तो लाग्यो मलाई त ।” अनि धमाधम धक्का मार्न थाले, दिदी तलबाट चाक उचाली उचाली मलाई साथ दिईरहेकी थिई । “तलाई चिक्न मन लागेको मेरो पुती चिलाको… जे गर्यौं राम्रै गर्यौं । अब दिनहुँ चिकाचिकी गर्नुपर्छ… बाहिरका कसैले थाहा पाउलान भन्ने डर पनि रहेन आवश्यकता पनि पुरा हुने…” दिदीको पुतीमा म अनवरत मच्चिईरहेको थिएँँ । दिदी पनि मेरो चिकाईमा साथ दिदैं म अझै जोडले चिक्नको लागि उत्साहित बनाउने कोशिस गर्दैथिई । “मेरो…ऽऽऽऽऽऽ भाईऽऽऽऽऽ मेरो…ऽऽऽऽऽऽ राजाऽऽऽऽऽ आहा…ऽऽऽऽऽऽऽ सि…ऽऽऽऽऽऽ सि…ऽऽऽऽऽ ऽऽऽऽऽ दे न दनक दे मेरो पुतीमा…ऽऽऽऽऽऽ जे पर्छ पर्छ म आज चिकाएरै मर्छु…ऽऽऽऽऽऽऽऽ ….. आऽऽऽऽऽऽऽऽह !!!”
मैले पनि दिदीको टाङ्गभित्रबाट दुवै हातले दुवै पोका जोडले समाएर आफ्नो भार पोकामा राखेर चिक्दै गएँ । दिदीले पनि देब्रे हातले पुतीको बाहिरि ओंठमा खेलाउँदै थिई । मेरो निधार तथा शरिर पसिनाले निथ्रुक्क हुन लाग्दा दिदीले भनि “भाई, फ्यान अन गर् न त ? तेरो ज्यानबाट त साह्रै पसिना पो निस्क्यो त…” “छोड्दे… पसिना आएर के भो त ?” अनि झनै मेरो लाँडोलाई उसको पुतीमा जोड जोडले पेल्न थालें । निकैबेर दिदीलाई चिकेपछी मैले दिदीको पुतीबाट लाँडो बाहिर निकालेँँ तर दिदीले तुरुन्तै मेरो लाँडो हातले समातेर मुखमा छिराएर चुस्न सुरु गरि । मैले दिदीको पोका खेलाउन थालें । केहिबेर मेरो लाँडो चुसेपछी दिदीले लाँडो छोडेर मेरो मुखमा आफ्नो मुख जोडी र हामीले लामै समय चुम्बनमा बितायौं । चुम्बन गर्दा पनि दिदीले मेरो लाँडो खेलाईरहेकी थिई भने म घरि दिदीको चाक खेलाउँथे घरि दिदीको पोका खेलाउँथें ।
चुम्बनको क्रमलाई दिदीले नै तोडेर चाक फर्काएर कुकुर्नी झै बसेर पुठ्ठामा हातले मुसार्दै भनि “लौ अब मलाई कुकुरले चिके झैं चिक पछाडीबाट…” तर मैले दिदीको पछाडीबाट पुतीलाई दुईतिन पटक चाटें अनिमात्र पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न थालें । चिक्दाखेरी दिदीले राम्रैसँग मलाई साथ दिदैं अझै जोडले चिक्नको लागि उक्साउँदै थिई भने मुखबाट आवाज पनि राम्ररीनै निकालिरहेकी थिई । म पनि दिदीको पुठ्ठामा घरि घरि हातले खेलाउँदै दिदीको चाकको प्वालमा औंलाले खेलाईरहेको थिएँँ । निकैबेरसम्म त्यसरी चिक्दा म थाकिसकेको थिएँँ र मेरो गति घट्दै थियो, दिदीले मेरो गति घटेको महशुस गरि र मसँगबाट छुट्टिएर मलाई बेडमा सुताईदिई अनि फेरि मेरो लाँडो चुस्न थाली, थोरै समय मेरो लाँडो चुसेर दिदीले मेरो लाँडोलाई हातले समाएर पुतीको प्वालमा छिराएर ममाथि बसेर आफैं मच्चिन थाली । दिदी आँखा चिम्लेर मेरो माथि मच्चिईरहेकी थिई भने म दिदीको पोका समाएर दिदीलाई साथ दिईरहेको थिएँँ । अचानक मेरो लाँडो टनटनिएर आयो र पिचकारी छोड्ला जस्तो भयो । त्यहीँँ भएर मैले स्वाट्टै दिदीलाई बेडमा पल्टाएँ अनि दिदीको पुतीबाट लाँडो बाहिर निकालेर छोल्न थालें । दुई-तिन पटक हात लगाउँदैमा मेरो लाँडोले पिचकारी छोड्यो । दिदीको नाईटो देखि निधारसम्म मेरो लाँडोले फुसीको धारा बगाएर सेतै बनाईदियो । त्यसपछि म शान्त भएँ तर दिदीले जुरुक्कै उठेर मेरो लाँडो चुसेर रहेलपहेल बाँकी फुसी पनि चाटेर सफा गरिदिई । अनि दिदीले फुसीले लथपथ ओंठ मेरो मुखमा ल्याएर जोडी, मैले पनि दिदीको ओंठमा लागेको फुसी अघिल्ला दिनमा झैं चाटेर निलिदिएँ । सँगै मैले दिदीको अन्य भागमा लागेको फुसी पनि चाटेर सफा गरिदिएँँ । त्यसपछी मुखमा जम्मा भएको फुसीलाई फेरि दिदीको मुखमा जोडेर यता उता गरिदिएँँ । दिदीले मेरो मुखको फुसी पनि आफैंले निली र भनि “आफ्नै भाईले चिक्यो मलाई आज… चिकुवा भाई…” मैले दिदीको पोका फेरी समाउँदै भनें “आफ्नै भाईलाई पुती देखाएर उक्साउँछे अनि भाईले चिक्यो भन्छे… नकचरी दिदी…” “दिदीले मेरो लाँडोलाई किस गर्दै भनि “तर बहुत मजा आयो ! अब दिनदिनै चिक है मलाई… मेरो लाँडे भाई…” मैले हुन्छ भनेँ र हिजोआज पनि यसरीनै चििकिरहेको छौँ !